Tsanangudzo:kutungamira kukura chiedza cob,akatungamirirwa kukura chiedza 1000 watt,1000 rakatungamirirwa kukura chiedza,kukura zviedza zvakatungamirirwa,,
 HomeProductsPH COB SeriesPH-B-L2
PH-B-L2 (Total 33 Products)
Zvigadzirwa zve PH-B-L2 , isu tiri vashandi vanobva kuChina, kutungamira kukura chiedza cob , akatungamirirwa kukura chiedza 1000 watt vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve 1000 rakatungamirirwa kukura chiedza R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Yakanakisisa COB LED Kura Mwenje 2020
Yakakwana Magetsi eMichero Magetsi Anokura Mwenje
Cob Yakazara Spectrum Indoor Chekuita Yakatakura Chiedza
Cob Yakazara Spectrum Indoor Chirimwa Hydroponic Inotungamira Chiedza
Yakazara Spectrum 1000W Cob Kura Chiedza
Factory Mutengo Yakatengwa Kukura Chiedza Watension
Wholesale Cob Yakatungamirwa Kukura Chiedza Amazon
Yepamusoro Hombe Yakakwana Spectrum Yakatakurwa Mwenje
Cree 1000W COB Kura Chiedza
1000W COB Yakadzika Kukura Chiedza Chiedza Chiedza
1000w Cob Yakasimba Yemukati Inotungamirirwa Kukura Chiedza
Phlizon Cob Yakatungamirwa Indoor Kura Chiedza Chakakwana Spectrum
Yakanyanya Kukosha Cree COB LED Kura mwenje
Yakazara Spectrum COB LED Dyara Chiedza
Cree COB LED Kura Chiedza 1000W
Phlizon Cob Yakakatiswa Kukura Chiedza Amazon
1000W Cree COB Kura Chiedza Phlizon
Yakazara Spectrum LED Kuka Mwenje Kune Zvirimwa
Unit Price: USD 110 - 99 / Piece/Pieces
Yakanakisisa COB LED Kura Mwenje 2020 Kana iwe uchitsvaga tsime rakasimba uye mwenje unozivikanwa nekuda kwemafuta kwenguva yakareba. Ehe, bhiza rerudzi rurefu ipapo Phlizon inounza iwe zera razvino COB LED inokura mwenje weiyo ine musoro...
Unit Price: USD 118 - 138 / Piece/Pieces
Phlizon CREE COB X2 245W Kura Chiedza Yakakwira PPFD Iyo 1000W PPFD kukosha ndiko 941.4 umol / ms inorembera pa18 inches. Iyo yakakwira iyo PPFD kukosha, zvirinani kukura kwechirimwa Yakazara Spectrum Dhizaini Chiedza ichi chine marudzi ese echiedza...
Unit Price: USD 120 - 99 / Piece/Pieces
2020 Zvibereko Zvakakwana Zvirimwa Zvakatungamira Kukura Chiedza Dyara Kurera Mwenje inoita sarudzo yakanakisa yekubatanidza uye magetsi embeu sezvo inogona kuiswa munzvimbo dzakasimba pasina kunetseka nezve kupisa kunovaka. Yakazara Spectrum...
Unit Price: USD 115 - 120 / Piece/Pieces
Cob Yakazara Spectrum Indoor Chekuita Yakatakura Chiedza Yakapihwa Mwenje Indoor Zvirimwa Kukura kwakakodzera kwazvo mukukura kwezvirimwa, kuyerera, uye kubereka michero. Kazhinji, zvirimwa zvemukati nemaruva zvinokura zvowedzera pakufamba kwenguva....
Tsanangudzo yechigadzirwa 1000W HPS inyanzvi COB yakatungamirwa kukura kwechiedza chizere Spectrum VEG MOTI mabhatani akatungamirwa anokura. Original Crees COBs LED inokura Mwenje ine kaviri mabhatani akazara magetsi ehukuru mukati mezvirimwa...
Unit Price: USD 130 - 138 / Piece/Pieces
Yakazara Spectrum 1000W Cob Kura Chiedza Yakatemwa Chiedza Chiedza isarudzo yakakura kune varimi vari kubata nemoto unopisa weHPS uye vanoda kuchinja kune chimwe chinhu chave kuzomhanya kutonhora. Kunyange zvazvo Full YOKOHAMA Zvikure Lights kuita...
Factory Mutengo Yakatengwa Kukura Chiedza Watension Zvibereko Zvirimwa Zvakatakurwa Chiedza Mwenje wakasarudzika une rwakajeka rwunoratidzwa wavelength iyo yakagadzirirwa kutsiva mwenje wezuva nemwenje wakabuditswa ne LED mwenje-inoburitsa chinhu,...
Tsanangudzo yechigadzirwa Unogona kurima chero muchero wemukati neiyi Kura Fiji. Taa dzinokura mwenje dzinoshandiswa kukura ma orchids, maruva, mapeche, matomatisi, basil, lettuce, miriwo, kale, sipinashi, girgrass, broccoli, mhuka dzesango, maruva,...
Tsanangudzo yechigadzirwa Yepamusoro Hombe Yakakwana Spectrum Yakatakurwa Mwenje Yakazara Spectrum + VEG / BLOOM & STRONGER switch COB Series ---- Yakazara Spectrum + VEG / BLOOM & STRONGER switch. Phlizon inonyanya kukoshesa muDare reDzidzo...
Unit Price: USD 115 - 99 / Piece/Pieces
Phlizon Cree 1000W COB Kura Chiedza About Phlizon: Service yevatengi ndiyo yekutanga yedu yekutanga! Maita basa nekutenga nesu. Tinotenda bhizinesi rako! Yakakwira PPFD Iyo 1000W PPFD kukosha ndiko 941.4 umol / ms inorembera pa18 inches. Iyo...
Yakanakisa 1000W COB Yakatakurwa Kukura Chiedza Chakakwana Spectrum Chekuita Chiedza Paunokura zvidyarwa mukati, kuva nemwenje chaiyo ye LED kwakakosha. Zvirimwa zvinoda chaiwo masvomhu echiedza kune iwo akakwana huwandu hwezuva zuva rega rega kuti...
Yakanakisisa COB Cree Yakatakurwa Kukura Chiedza
Phlizon Cob Yakatungamirwa Indoor Kura Chiedza Chakakwana Spectrum Ndeipi yakanyanya COB LED Kukura Chiedza? Iyo yakanaka COB LED inokura mwenje zvichienderana nenzvimbo yekudzivirira, kuwanda kwechiedza, uye chimiro chekunakisa ndiyo Phlizon COB...
Phlizon Cob Yakatungamirwa Indoor Kura Chiedza Chakakwana Spectrum Iyo Phlizon COB mwenje inorova chero mwenje yakafanana maererano nekubuditsa uye kuwoneka. Ivo vanoita zvinodhura zvakati wandei, asi iro simba rekuwedzera uye zvirinani mhedzisiro...
Unit Price: USD 100 - 120 / Piece/Pieces
Yakanyanya Kukosha yemari Phlizon Cree COB LED Kura mwenje Phlizon CREE COB inotungamirwa inokura inobereka kubhururuka kwakanyanya kune inoshamisa nhanho yekupikisa kwemafuta. Ehe, nepo zvimwe zvese zvichikura mwenje zvingave zvichibudirira mukupa...
Phlizon Yakazara Spectrum COB LED Dzviti Chiedza Phlizon inonyanya kuzivikanwa mhando inozivikanwa nemhando. Mushure mekupa musika nezvakakura zvechinyakare kukura marobhoti muCree cob nhezheni, ivo zvino vatangawo kupa COB LED Kukura Mwenje kune...
Cree COB LED Kura Chiedza 1000W Zvinongedzo zvekufunga Kana uchisarudza Chiedza Chinokura Kuzvibvunza mibvunzo iyi kunogona kukubatsira kuita sarudzo yakanakisa. Ndedzipi mhando dzezvirimwa dzauchange uchikura? Iwe unozokura gore rese kana...
Phlizon Cree COB LED Kura Chiedza Kuenzaniswa nemamwe kukura mwenje, Cree COB LED Kura mwenje magetsi anoshanda zvakanyanya - zvichienderana nemwenje wechigadziri Phlizon, magetsi emuchadenga e LED anoshandisa angangoita makumi matanhatu muzana...
Phlizon Cob Yakakatiswa Kukura Chiedza Amazon Iyo cob inotungamirwa inokura yakanaka yakanaka kune photosynthesis uye inogona kukwidziridza zviitiko zvekloroplast, inova yakakodzera mashizha ane hutano. Iyi yakazara Spectrum yakatungamirwa...
1000W Cree COB Kura Chiedza Phlizon Phlizon LED Kuroedza Mwenje ndiyo akanakisa magetsi eEU Mota pamusika nhasi pamatengo ese emitengo, Phlizon ndeimwe yemakuru anozivikanwa mazita eEULE kukura muindasitiri, uye nechikonzero chakanaka. Nemakore...
Yakazara Spectrum COB LED Kura Mwenje Pane Zvirimwa COB Yakazara Spectrum chiteshi Iyi chiteshi inodya 90W uye inoburitsa huwandu hwakazara kubva pa03nm - 780nm, hwakanakira hutachiona, kumera, kumera. Veg / Bloom Enhancing chiteshi Iyi chiteshi...
China PH-B-L2 Vatengi
Phlozon`s COB series dzinokura chiedza dzinobvisa zvose wavelengths of light izvo zvinogona kunyatsogadziriswa nemiti yekusika.
Yakanakisisa Specturm yakagadzirirwa kuenzanisa zvakakwana nzvimbo dzakakura dzezvibereko zvedoti, kunyanya kuChirangaridzo.
COB + Dual-chip, inonyanya kuonekwa, PPFD yakakwirira .Vadzidzi vaviri vanononoka vane bhora mbiri (inotumira kubva kuJapan) uye guru guru realuminium inotonhorera kuti dzidzivirire mwenje inokura kubva pakushambidzika, kutonhora kwakanaka, kurarama kwenguva refu.Photosynthesis uye kukurudzira kuwedzera kukura uye maruva.
1000w / 2000w / 3000w COB yakatungamirira kukura chiedza , ichakupa mamwe maitiro apo mbeu dzako dzinoda simba rakasiyana rekujekesa.
Kukura Mwenje ndiyo chisarudzo chakakura kune varimi vari kutarisana nemagetsi anotsvaga eHPS uye vanoda kuchinje kune chimwe chinhu chichaita kuti chitonhore. Kunyange zvazvo LED dzichiwedzera magetsi dzinobudisa kupisa, maduku maduku haagoni kuunza kutonhora kwekukura kwako nzvimbo. Kunyange iyo mienzaniso yakasimba ye LED inokura mwenje inoita kuti huni huzhinji huripo huri mukati-muhutano hwekugadzirisa hutano kubatsira kudzivirira kutonhora kubva kumvura yakananga kumiti yako.
1000w 2000w 3000w 400w akatungamirirwa kukura chiedza
3.Core Coverage: Kuwedzera kune zvinyorwa zviviri, kana ukasarudza chiedza chekusima, iwe unoda kuenzanisa nzvimbo yepamusoro yezviedza zvakasiyana-siyana zvemiti, zvechokwadi, ukuru hwepakati pekugovera nzvimbo. Pakati pese, mukugadzira mbeu, unogona kuisa chiedza chekusimudza uye nzvimbo yakavharidzirwa yakakura. Muchiedza chemukati unogona kuisa chimiro chechiedza chiri pasi uye chivako chiri checheche nokuti chimiro chinoda kuwedzera chiedza pachigamba chino. Iwe unofanirwa kuenzanisa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugovera nzvimbo kuti usarudze chiedza chemuti chinokufananidza newe.
Mifananidzo yakanyatsonzwisiswa yemakumbo 1000w yakatungamirirwa kukura
kutungamira kukura chiedza cob
akatungamirirwa kukura chiedza 1000 watt
1000 rakatungamirirwa kukura chiedza
kukura zviedza zvakatungamirirwa
Yakatungamira Kukura Kwechiedza